Akara ịnyịnya & Nkọwa | Mmụọ, Totem, na Anụmanụ Ike - Mmụọ Zuru Ike Anụmanụ
Ihe nnọchi ịnyịnya na ihe ọ pụtara
Foto si na nwanne m nwanyị WhatIsMySpiritAnimal.com
Site na omenala niile akara na nkọwa nke Horse gụnyere:
Nnwere onwe gabigara ókè
Ndụ na ọnwụ (ịnyịnya ọcha / ojii ojii)
Ọchịchọ siri ike na mmekọahụ
Njem gafee oge na ohere
Epic ike nke uche, ahụ na mmụọ
Relationshipstụkwasị obi mmekọrịta
Ije ozi nye ndị ọzọ na onwe
Zọ esi na nke ifo gbakwunyere ala ndị ka elu (Celtic & Greek Mythology)
Ka ị na-agụ site na nchịkọta miri emi nke ihe nnọchi anya ịnyịnya na nkọwa ebe a na Daily Horoscope Astros, wepụta oge iji tụgharịa uche n'otú Horsnyịnya ike si agwa gị okwu.
Tụlee ụdị onyinye ime mmụọ Horse pụtara inye gị yana otu esi chọọ iji ike ya rụọ ọrụ.
N'ihi na a manyere gị ịchọ Horsnyịnya Symbolism na Pụtara, ọ bụ ihe ịrịba ama na mkpụrụ obi gị (onye dị elu karịa onwe ya) na-agba ọsọ iji mezuo nnwere onwe na ikike ịgagharị ụwa niile.
N'ihi na ọ bụ naanị inyinya nwere ume na ume ịgbago n'ọchịchịrị nke Middle Earth, gafee ala niile nke ụwa anyị wee rịgoro n'eluigwe na gafere; na-agba ọsọ na amara na ọbụbụeze n'etiti 5 Elements : Earthwa , Ikuku , Mmiri , Ọkụ na Mmụọ ma ọ bụ Aether .
Nyịnya bụ nduzi mmụọ dị ịtụnanya na-anọchite anya ebumnuche gị, ọchịchọ gị, ọchịchọ gị na nnwere onwe gị dum.
Mgbe Horse batara n’egwuregwu, enwere mkpali kariri iburu gị gabiga ihe ọ bụla. Otú ọ dị, akara ịnyịnya, na-agbanwe ma Horsnyịnya ọhịa ma ọ bụ na-agbakwunye. Ozugbo anyịnyachara, tnyịnya na-anọchite akụkụ ndị ahụ anyị nwere nke anyị machibidoro ma chịkwaa, ọkachasị agụụ mmekọahụ. Horsed Horse na-egosiputa ọrụ na ntụkwasị obi mmekọrịta.
N’ọdị anụ ọhịa, enyịnya na-ekwusi ike na nnwere onwe n’elu ụkwụ ya, ọ bụghị naanị na anụ ahụ mana uche na mmụọ. Enweghị igbochi ranyịnya mgbe ifufe na-agba ọsọ, mana Horse na-enwekwa obi ụtọ iso ndị ezinụlọ na ndị enyi ya nọ. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ mgbe niile ịbịkọta ọnụ na ntọala ebe mmadụ anaghị efu efu. Ọ bụ ya mere ihe atụ nke Horse ji atụ okwu banyere mmekọrịta mmadụ na ibe anyị na ikike ịkwaga ma pụọ ​​na gburugburu dị iche iche dịka ọfụma.
Jung chere na Horsnyịnya ahụ na-anọchi anya ike onwe onye - ihe anyị na-achịkwa na ndụ anyị, na onyinye anyị. Nyịnya bụ ihe ịga nke ọma na ịme ihe onwe onye. Mgbe ị matara ihe na - akpali gị ma mee ka mmata ahụ rụọ ọrụ, ị ga - aga n’ihu na ọsọ ọsọ karịa etu ị siri chee.
Ọ bụrụ na esnyịnya na-amalite igosipụta na onyogho ebe ha nọ na ụlọ anụ ma ọ bụ kekọta, ọ bụ ozi na ihe na-egbochi gị ma na-egbochi ikike gị. O nwekwara ike ikwu maka ogo ume dị ala yana mkpa ọ dị ị toa ntị na otu ị si eji anụ ahụ gị eme ihe.
Nyịnya nwere ike buru naanị ọtụtụ akpa tupu ike gwụ ya site na ibu arọ. Chọpụta ihe ịkwesịrị idobe ka i wee nwee ike belata ibu dị na mkpụrụ obi gị.
Whitenyịnya White na-agbaso n'akụkọ ifo zuru ụwa ọnụ, nke a na-ejikọta na chi ma ọ bụ ndị dike. Nyịnya na-egosikwa na ahịrịokwu dịgasị iche iche dịka 'site n'onu ịnyịnya' (ijikọta ịnyịnya na nkwukọrịta ziri ezi) ma 'pụọ n'ịnyịnya gị dị elu' (nke na-egosi na ego adịkwaghị).
Ọ bụ ezie na otu mmụọ mmụọ ahụ na-eduzi nwere ike igosipụta n'oge ndụ anyị niile, nkuzi ya nwere ike ịdị iche na nke ọ bụla ma enwere ọdịiche dị n'etiti anụmanụ mmụọ, ụmụ anụmanụ Totem na ụmụ anụmanụ ike
Mmụọ, Totem & Ike anụmanụ
Anumanu Anumanu: Anyịnya
Ọ bụrụ na inyinya na-apụta na mmata gị (n'ụdị anụ ahụ ma ọ bụ na fim, abụ, TV, wdg), ọ pụtara na azịzala ajụjụ 'Gịnị Bụ Mmụọ M Mmụọ'.
Dị ka mmụọ mmụọ gị, enyịnya na-egosi gị onwe gị dị ka akara na oku maka nnwere onwe na-abanye ụwa gị. Ọdịdị ugboro ugboro nke ịnyịnya bụ akara maka gị iji kwe ka ịnyịnya nwee ike inye gị ike na ntachi obi dị mkpa n'oge a. Mmụọ nke usoro a nwere ntụkwasị obi nwere ike iburu gị n'ụzọ ziri ezi iji hapụ nkekọ ọ bụla na-egbochi gị.
libra nwoke n'anya nwanyi cancer
Enyịnya bụ anụmanụ mmụọ na-enyere aka nke ukwuu nke na-enyere aka ịkwalite edemede na uto ime mmụọ site n'ịkụziri gị otu esi emepụta akara ngosi n'etiti ọchịchọ gị maka nnwere onwe na ibu ọrụ gị ugbu a. Enwere oge izu ike na oge ịgba ọsọ na ọtụtụ ibi n'etiti. Nwee ụtọ apụl na-atọ ụtọ nke na-adapụsị n'osisi ahụ tupu iburu nsogbu ahụ ọzọ.
Mmụọ mmụọ na-enwe mmasị ịrụ ọrụ na ifufe. Ọ bụ ezigbo onye nkụzi banyere ike onwe onye ma na-arụ ọrụ site na ikuku elemental. N'agbanyeghị ebe ọ ga - akpọrọ gị, ị ga - enwe mmetụta nke nguzozi - otu esi agba ma ghara ịda ma ọ bụ daa ọrụ gị.
Cheta na enyịnya bụ onye ozi wee si na mpaghara ndị mmụọ ozi. Ọ bụrụ na ị nwere otu ekpere, takwunyere ịnyịnya ma hapụ ya ka ọ buru onye nchebe onye enyemaka ahụ.
Anụmanụ Totem: enyịnya
Ọ bụrụ na ị họrọla ịkpọku mmụọ ịnyịnya dịka anụmanụ gị dum, jide n'aka na ị dị njikere maka uto ime mmụọ na nkuzi ị nwere ike izute. Naanị cheta, mmụgharị nwere ike ịdị mma ma ọ bụ na-ezighi ezi yabụ jiri nkuzi nke ịnyịnya mee ihe n'ụzọ amamihe.
Lelee anya na ịnyịnya mgbe ị chọrọ ikwupụta echiche gị kpamkpam. Ọ bụ anụmanụ nke njem, ike, ọbụbụenyi na ezinụlọ. Mgbe ị na-eche nsogbu, ịnyịnya maara nke ọma otu esi aga na ima elu iji merie ihe mgbochi ahụ.
Ọ ga-enyekwara gị aka ma ị nọrọ n’omume. Ngwongwo inyinya bu ihe ichoro ohuru. Oge erugo ịga n'ihu? You kwesịrị inweta ụlọ ọhụrụ ma ọ bụ njem gaa ebe ndị a na-amaghị ama?
Buru ịnyịnya buru ibu mgbe ị na-achọ azịza nye ụdị ajụjụ ndị ahụ.
scorpio nwanyị na nwoke Virgo hụrụ ndakọrịta
Anụ Ike: Anyịnya
N'ihi na anyị niile jikọtara na ọkwa larịị, ị nwere ike iru n'ime onwe gị wee banye n'akụkụ ahụ gị nke nwere mmuo, njirimara na ikike nke enyịnya.
Gbanyụọ ma jiri njirimara Horse mee ihe mgbe ịchọrọ ị nweta ebumnuche. Banye n'ime ma ghọta ọdịdị ebumpụta ụwa na ikike ị nwere iji kwekọọ na ume gị na njirimara nke ịnyịnya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ' Nwee Horsnyịnya '.
Na Shamanism ịnyịnya ike anụmanụ na-eburu onye na-agwọ ọrịa n'etiti ụwa. Dị ka ndị dị otú a, anụmanụ ịnyịnya na-enyere gị aka ijikọ na ike na ikike ime mmụọ n'ụzọ nkeonwe. Nyịnya na-enyere gị aka ịhụ ihe dị iche iche ma mepee ụzọ maka onyinye ọhụụ na njikọta ọhụụ na ụwa.
Anụ ike ike ụmụ anụmanụ na-akụziri anyị ihe ịtụnanya ihe nke ịbụ eziokwu ka onwe n'agbanyeghị anyị bridle. Nduzi nke mmụọ a na echetara anyị ibi ndụ ugbu a na nke ọma na ekele na obi anyị n'ebe ndị anyị na ha na-ekerịta ndụ anyị nọ.
Ihe Odide Celtic
Ọ bụ otú ahụ ka ndị Celts oge ochie si ghọta omume ụmụ anụmanụ ka a na-amụ banyere ya na nnabata ha n'ụzọ ndụ nke anụmanụ ọ bụla nke ukwuu nke na Horse Totem nwere ebe dị nsọ karịsịa n'ebe ọdịbendị ha dị. Dị ka ihe omimi na ndị dibia, ndị Celtic lere ndụ niile anya dị ka njikọta, jikọtara ya na isi mmalite (dị ka a hụrụ na nka nke Ọkpụkpụ Celtic ).
Na Celtic lore, esnyịnya nwere mkpakọrịta siri ike na Chi, karịsịa Epona na Macha ha abụọ gosipụtara dị ka ịnyịnya na-echebe Earthwa, gosi anyị ọdịnihu ma duzie ụmụ mmadụ na ụkwụ zuru oke. Aha Epona putara 'nne' na obu ya bu nani Chi nke ufodu ndi Rome na-efe.
Ọ dị nnọọ ka ụdị ya na Welsh Rhiannon onye na-agba ịnyịnya nke dị ichikota ma na-achịkwa ọmụmụ.
E nwekwara ụdị ịnyịnya ndị ọzọ dị n'etiti ndị Celtic Divine dị ka ndị a na-ahụ maka ịnyịnya mmiri na chi osimiri Manannan Mac Lir.
Otu a ka inyinya Celtic siri buru ikike nke idozi oghere di n’etiti ndi mmadu na ndi mmuo, ma ndi ukwu ma ndi nta.
Ihe omuma umu Anumanu America: Anyịnya
Dị ka Celts, ụmụ amaala America na-ahụ, na-aghọta ma na-asọpụrụ okike na ụmụ amaala ya niile. Dika anumanu ndi ala America na-aga, (karisia ndi ogwu ma obu ndi dibia anwansi dika a na-akpo ha n’agburu ụfọdụ), Horse Medicine is, di ike di egwu ma jiri obi umeala na nkwanye ugwu mesoo ya.
Mụ amaala America kpọrọ Horses 'nkịta Chukwu'. Naanị aha ahụ na-egosi nsọpụrụ ndị a ndị mmadụ nwere maka ihe okike a. Ndị otu onye na-agba ịnyịnya na ịnyịnya na-egosi ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù nke anyị nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe.
Na mgbakwunye, inyinya buru ibu buru ibu dika akara nke ike, ikike na ihe ịga nke ọma.
A na-egosipụta ndị Shaman nke agbụrụ ahụ n'azụ Flying Horses iji ruo ebe ndị mmụọ n'ụzọ nchekwa. Dị ka nke a, ha nwekwara ike ịnọchite anya ike iji merie ọnọdụ siri ike.
Horse Zodiac China
Mụta ihe niile banyere Afọ nke Horsnyịnya àgwà na àgwà .
Nkọwa nrọ & nyocha
Na nkọwa nrọ, nrọ maka ịnyịnya jikọtara ya na ike gị - ọ bụrụ nke uche, nke anụ ahụ ma ọ bụ nke mmekọahụ. Ọnọdụ ịnyịnya na ihe ha na-eme na-enye gị nghọta ka ukwuu banyere ozi Horse wetara gị. Dịka ọmụmaatụ, ịnyịnya isi nwere isi abụọ na-anọchite anya nhọrọ abụọ na-adọrọ adọrọ na ndụ nke na-ahapụ gị idozi.
Gaa na nke m Nkọwa Okwu ịmụtakwu banyere Nyịnya na nrọ .
leo nwoke na nwanyi scorpio nwanyi
map nke usoro mbara igwe
ọnwa na-abụ na ihe ịrịba ama taa